Sarotiny fa tsy mila ady… | NewsMada
Sarotiny fa tsy mila ady…
Mbola maro ireo mametra-panontaniana amin’ireo teboka sasantsany tao anatin’ny kabarin’ny filoham-pirenena, ny alahady teo. Misy ireo niandry zavatra hafa, ka tsy nifanaraka tamin’izany no henony. Nisy kosa ireo nandray vilana ary maro ireo mbola miandry fanampim-panazavana avy amin’ny fanjakana. Mazava ny mikasika ny ady amin’ny coronavirus: mitohy ary mihahenjana ireo fepetra.
Nisy teboka lehibe hafa anefa tao anatin’ilay kabary, na fohy no ho ny mahazatra aza. “Vanim-potoana ijoroana amin’ny tena Falahelovantena izao”, hoy ny filoha Rajoelina. “Tsy ny fahavalo tsy hita maso ihany no misy, fa misy koa ny fahavalo hita maso…” hoy hatrany izy. Mbola nisy koa ny hoe “vonona hiara-kiasa amin’ny rehetra ny fitondram-panjakana… Tsy baikoan’ny fikambanana na firenen-kafa…”. Tsy tokony ho teny mandalo fotsiny ireo ho an’ny mpamakafaka, fa mifono hevi-dalina sy asa hotanterahina tsy ho ela.
Mety nisy nandray ny kabary ho famakiana ady amin’ny firenen-kafa, na rafitra iraisam-pirenena izany. Mety ho marina, kanefa tsy voatery ho izany koa. Samy hafa ny sarotiny sy ny filana ady. Tonga amin’ny fotoana fanentanana sy fiantsoana firaisankinan’ny rehetra, tsy hanavahana fironana ara-politika ny firenena.
Mety mandalo fotsiny amin’ny sasany tokoa, kanefa fanombohan’izany fanehoana fitiavan-tanindrazana sy firosoana mankany amin’ny tena Fahaleovantena izany, ny fampiantsoana ny masoivohon’i Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara. Nampahafantarina azy fa tsy mankasitraka ny fanapahan-kevitry ny fitondrana frantsay, mikasika ny Nosy Glorieuses, iray amin’ireo Nosy malagasy manodidina an’i Madagasikara ny fitondrana malagasy.
Efa dingana iray lehibe izay! Sarotiny, miteny ny tsy fankasitrahana, mitaky fifampiresahana, indrindra mijoro amin’ny hevitra. Tsy azo sambasambaina anefa, fa tsy maintsy hirosoana hatramin’ny farany rehefa natomboka. Eo no ilaina ny herin’ny maro…